ကျောင်းတော် ကြီးမှာ အလွဲကြီး လွဲခဲ့ဖူးတဲ့ မိုချို ( မိုချိုရဲ့ အလွဲများ ၂ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ကျောင်းတော် ကြီးမှာ အလွဲကြီး လွဲခဲ့ဖူးတဲ့ မိုချို ( မိုချိုရဲ့ အလွဲများ ၂ )
ကျောင်းတော် ကြီးမှာ အလွဲကြီး လွဲခဲ့ဖူးတဲ့ မိုချို ( မိုချိုရဲ့ အလွဲများ ၂ )
Posted by မိုချို on Jun 27, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 27 comments
မိုချိုတယောက် အလွဲတွေ အများဆုံးလုပ်ခဲ့တာကတော့ စက်မှုတက္ကသိုလ် ပထမနှစ် တတ်ခါစ အချိန်တွေပါပဲ။ သိတတ် စအရွယ်တည်း က ဆရာဝန်ရူး ၊ ရူးနေရာက ဆေးမှတ် ကို ကပ် ပြုတ်သွားလို့ စိတ်နဲ့ လူနဲ့မကပ်ဆုံး ကာလပါ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ဖြစ်သွားတော့ ၁၀ တန်း တုန်းကလို စုတ်တီး စုတ်ဖက် ပေကပ်ကပ် စာဂျပိုးရုပ်လေး မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ပြင်တတ်၊ ဆင်တတ်၊ ပဲများတတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဖရက်ရှာ ကျောင်းသူလေး ဖြစ်နေပါပြီ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မိန်းမပီသတဲ့အိနြေ္ဒရှင်လေးလိုလို၊ ယောင်္ကျားလေးတွေ ရှေ့ ဖြတ်လျှောက်ရင်ပဲ ရှက်ကိုးရှက်ကန်း ခြေ လှမ်း မှားတော့ မယောင်ယောင်၊ စတိုင်တွေ ဖမ်းလို့ပေါ့။
အမှန်မှာတော့ အဲဒါတွေ အကုန်လုံးက ဟန်ဆောင်ထားတာ။ ဒေါ် မိုချိုတို့ ပင်ကိုစိတ်ရင်းက ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် ဘယ်သူ့မှ သိပ်ဂရုမစိုက် တတ်သလို သိပ်လည်း မရှက်တတ် မကြောက်တတ်ဘူး။သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လည်း သ်ိပ်မရှိဘူး။ ….အဲ ….ရုပ်ကလေးကတော့ နဂိုရှိပြီးသား ဆိုတော့ ပြင်ဆင်လိုက်ရင် နဂိုင်း ထွက်တယ်ပေါ့…ဟိ..ဟိ….။ အ၀တ်အစားဆိုလည်း အရင်တုန်းကလို အင်ကျီ တထည် တန်းပေါ်ပစ်တင်ပြီး တပတ်လုံးဝတ် တာမျိုး မလုပ်တော့ပဲ ကိုယ်နဲ့လိုက်မယ့် ဟာလေးတွေ ရွေး ပြီး လှတပတလေး ၀တ် တတ်နေပြီပေါ့။အမှန် မှာတော့ ရည် မှန်း ချက်တွေ ပျက် စီး သွားပြီးတဲ့ နောက် ဦးတည်ချက် မဲ့ နေတဲ့ အချိန် တွေ လို့ ပြောလို့ ရတယ် ပေါ့လေ။
အလွဲတွေပြောရရင် တော့ …. တနေ့ guide တပည့် အိမ် ၀င်နေရလို နောက်ကျပြီ့း  ကျောင်းရောက်တဲ့အချိန် မှာ အတန်းတွေ စ နေပါပြီ။ မိုချိုလည်း အတန်းထဲ လူစုံတဲ့အချိန် ၀င်ရမှာဆိုတော့ ဘက်စ် ကား တိုးစီးလာတဲ့ ကိုယ့် ရုပ်ကို ပြန် ရွှိုင်း ရအောင် သန့်စင်ခန်းထဲ အရင် ၀င်လိုက်ပါတယ်။
ခါတိုင်းလိုပဲ လွယ်အိတ်ကို မှန်ရှေ့ကစင်ပေါ် ပစ်တင် မယ် လုပ်တော့ ခါတိုင်း ပစ္စည်းတင်တဲ့ စင် နေရာမှာ ဘေစင်တွေ တန်းစီနေတာ တွေ့လိုက်ရတယ ။ မိုချိုလည်း ဒီဘေစင်တွေ အရင် က မတွေ့ဖူးပါဘူး၊ ပုံစံတွေကလည်း တမျိုးပဲ လို့တွေးပြီ အနားကပ်ကြည့် လိုက်ပါတယ် ။ ဇဝေဇ၀ါနဲ့ တောင်ကြည့်မြောက် ကြည့် ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန် တကယ့်ဘေစင် အစစ်ကို တွေ့လိုက်တော့မှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အလွဲကြီး လွဲသွားပြီလို့ သိလိုက်ပါတယ်။ …..တကယ်တော့….မိုချိုရောက်နေတာ ယောက်ျားလေး အိမ်သာထဲမှာပါ။ ယောက်ျားလေး တွေ ဆီးသွားတဲ့ ကြွေခွက် တွေကို တခါမှ မတွေ့ဖူးတော့ ဘေစင်တွေတန်းစီနေတယ်လို့ ထင် လိုက်မိတာပါပဲ…။
မိုချို ကံကောင်းသွားတာက စာသင်ချိန် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဗွီဒီယိုထဲက အိမ်သာမှားဝင်တဲ့ မင်းသမီး မင်းသားတွေလို ဇတ်လမ်းဖြစ်စရာ မကြုံ ခဲ့ရပါဘူး။ တခါးပိတ်ထားတဲ့ အိမ်သာခန်းတွေ ထဲမှာ လူ ရှိနေရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး၊ အပြင်က ဘေစင်တွေ ရှေ့မှာ ရှိမနေတာကို ပြောတာပါ။ မိုချိုလည်း အပြေးအလွှား ပြန်ထွက်လာပြီှးအပြင်ရောက်မှ ငါ့ ဘယ်သူများတွေ့ သွားသေးလဲလို့ ပြူးတူးပြဲတဲ ကြည့်ရသေးတယ်။
မိုချိုတို့ကျောင်းက ယောက်ျားလေး များတဲ့ကျောင်း ဆိုတော့ ယောက်ျားလေး သန့်စင်ခန်း အရေတွက် လည်း ပိုများပါတယ်။ သန့်စင်ခန်း တွေက အဆောက်အအုံတွေရဲ့ ထောင့်တွေမှာ ဆင်တူယိုးမှား ရှိနေတတ်တော့ ကျောင်း ရောက်တာမကြာသေးတဲ့ မိုချိုတယောက် မှတ်မိ သယောင်ယောင်နဲ့ နမော်နမဲ့ စွက်ဝင်သွားတာပါ။
နောက်အလွဲ တခု က မိုချိုတယောက် တည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းမ တယောက် မိဘချင်း ရင်းနှီးတဲ့အဆောင်နေ ကျောင်းသားတယောက် ကို သူ့ အိမ်က ပေးခိုင်းတဲ့ လူကြုံ ပစ္စည်း သွားပေးတာ မိုချို နဲ့ နောက် တယောက်က အဖော် လိုက်သွားပေး ကြတယ်။ ကျောင်းသားက အဲဒီနေ့ အတန်း မတတ်ဘူးဆိုလို့ ကျောင်း ၀င်း ထဲက( Eလား Fလားမမှတ်မိတော့ဘူး၊ မိန်းပေါက်နဲ့ အနီးဆုံး) အဆောင် ကို လိုက်ပေးကြတာ။
အပေါက်ဝမှာ တွေတဲ့လူကြီးကို နာမည်၊ အတန်း၊ မေဂျာ ပြောလိုက်တော့ သွားခေါ်ပေးတယ်။ ကျောင်း ချိန် တွင်း ဆိုတော့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ လူတယောက်မှ မရှိပါဘူး။ မိုချိုတို့လည်း စောင့်ရင်း လျှောက် ကြည့်လိုက်တော့ စတစ်ကာမှန်ကာထားတဲ့ ဖုန်း ရုံ လေးကိုတွေ့တာနဲ့ မိန်း ကလေးတို့ ထုံးစံ အနားကပ်ပြီး မှန်သွားကြည့်ကြတယ်။ ထမိန် ပြင်ဝတ်၊ အင်ကျီ ဆွဲချ၊ ခေါင်းဖြီး ၊ ကိုယ်ကို ဟိုဘက်လှည့် ဒီဘက် လှည့် နဲ့ မိန်း ကလေးတွေ ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ရှေ့ ရောက်ရင် လုပ်နေ ကြ အတိုင်း လုပ်ကြတာပေါ့လေ…။
လူကြုံ သွားပေးတဲ့ ကျောင်းသားထွက်လာတော့ သူငယ်ချင်းက လူကြုံ ပစ္စည်းပေး ၊သူ့အိမ်က မှာ လိုက်တာ နဲနဲပါးပါး ပြောနေတုန်း ဖုန်း ရုံ ထဲကနေ သကောင့်သား ၂ ယောက် စပ် ဖြီးဖြီး နဲ့ ထွက်လာပြီး ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့်လုပ်နေတာ တွေ့ တော့မှ မိုချိုတို့လည်း ကိုယ် အလွဲ လုပ်မိတာ ကို သဘောပေါက်လိုက်တယ်။
စတစ်ကာမှန်ဆိုတော့ မိုချိုတို့က အထဲကို မမြင်ရပေမယ့် အထဲမှာ နဂိုတည်းက ရှိနေတဲ့ သကောင့်သား ၂ ယောက် ကတော့ မိုချိုတို့လုပ်သမျှကို အတိုင်းသား မြင်နေရပါလိမ့်မယ်။ အနီးကပ် ရှေ့တည့်တည့် ကြီး လာရပ်ပြီး လုပ်ချင်တာ လုပ်နေ ကြတဲ့ ကောင်မလေး ၃ယောက် ကိုကြည့်ပြီး အဲဒီ၂ယောက်သား ဘယ် လောက်များ ဟားနေလိုက်ကြမလဲ လို့တွေး လိုက်တိုင်း ကိုယ်ရဲ့ မဆင်မခြင် လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ပဲ အမြင် ကပ်မိတော့တယ်။
မိုချိုတို့ ကျောင်းမှာ အတန်း ငယ်တွေ က စာသင်ခန်း အပိုင် မရှိပါဘူး။ တနေ့ စာသင်ချိန် ၈ ချိန်ဆိုရင် ၁ချိန် ကို ၁ခန်းပြောင်း ပြီး စာသင်ခန်း ၈ ခန်း ပြောင်းသင်ရပါတယ် (အိပ်ငိုက်မှာ စိုးလို့ ထင်ပါရဲ့ ) ။ နမော်နမဲ့ မိုချို ကတော့ အခန်း ပြောင်းတိုင်း ဘောပင်၊ ခဲတံ ကအစ ပိုက်ဆံအိတ်၊ ထမင်းချိုင့် အဆုံး မကြာခဏ ကျန်တတ်လို့ နောက် အတန်း ကလူတွေ က လိုက်ရှာပြီး ပေးကြပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ က ဆို …ဇာတ်လမ်းရှာနေတာလား ..လို့ တောင် ပြောကြပါတယ်(….. ဇာတ်လမ်း က ရှာစရာတောင် လို ၀ူး..ရယ်… အဟိ..) တကယ်တော့ကိုယ် တခါမှ စိတ် မကူးဖူးတဲ့ ကျောင်း မှာ ကိုယ် စိတ် မ၀င် စားတဲ့ စာတွေ သင် နေရတော့ မလျှပ်ပြာ မိုချို တယောက် လွဲချင်တိုင်း လွဲ နေတာ မဆန်းပါဘူး။ နောက်တော့ သိပ်ပြီး စိတ်မကြည်တဲ့ နေ့ ဆို အလွဲ မလုပ်မိအောင် library သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးနားနေဆောင် ထဲသွားအိပ်နေ လိုက်တော့ တယ်။
သတိထားမိတာ တခု ပြောပြပါ အုံးမယ်။ မိန်းမ အိမ်သာတွေထဲ ယောက်ျားတွေ မရောက်ဘူးသလို ယောက်ျားအိမ်သာတွေ ထဲလဲ မိန်းမတွေ မရောက်ဘူးကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိန်းမအိမ်သာနဲ့ ယောက်ျားအိမ်သာ မတူတဲ့အချက်ကို အများ သိပ်မသိ ကြပါဘူး။ ကွာ ခြား ချက် က ယောက်ျားအိမ်သာက အနံ့ပိုပြင်းတယ် ၊ရှင်းရှင်းပြောရရင် ရှူရှူး နံ့ ပို နံပါတယ်။ ဘေစင်လို့ ထင်မိတဲ့ ဟာ တွေကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အိမ်သာထဲစ၀င်ဝင်ချင်း နံလိုက်တာ လို့တောင် လွှတ်ခနဲ ပြောလိုက်မိသေးတယ် ….။
မိုချို ပြောတာ သဘောမတူတဲ့ ယောက်ျားလေးများ အထောက်အထားနဲ့ (မိန်းကလေးအိမ်သာ ထဲ ဘယ်တုန်းက ၊ဘယ်လို ရောက်ခဲ့တယ် ၊ ပို နံတယ် ပို မနံဘူး စသည်ဖြင့် ) အငြင်းပွားနိုင်ပါတယ်။
ကြုံ တုန်း ကြွားရရင် မိုချို က ပြေတီဦးနဲ့ တနှစ် တည်း ကျောင်းဝင်တာပေါ့လေ။ အဲတုန်း က ပြေတီဦး ဆိုတာ ယောက်ျားလေးတွေ အများကြီး ထဲ သတိတောင် ထားမိဘူး..ရယ်။ ပြောရရင် မိုချို့ တို့ သူငယ် ချင်းတွေ အချင်းချင်း လက်တို့ ပြီး ပြ ရလောက် အောင် ချောတဲ့ ၊ သန့် တဲ့ ထဲ မပါဘူး ပေါ့။
ပြေတီဦး ကိုတောင် သနားခဲ့သော သတိမထားခဲ့သော မိုချိုကွ
ဒေါ် မိုချိုတို့ ပင်ကိုစိတ်ရင်းက ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် ဘယ်သူ့မှ သိပ်ဂရုမစိုက် တတ်သလို သိပ်လည်း မရှက်တတ် မကြောက်တတ်ဘူး။
အသံထွက်အောင် ဟိဟိ မိလို့
ပြောရရင် မိုချို့ တို့ သူငယ် ချင်းတွေ အချင်းချင်း လက်တို့ ပြီး ပြ ရလောက် အောင် ချောတဲ့ ၊ သန့် တဲ့ ထဲ မပါဘူး ပေါ့။
ယုံဘူး ။ အိမ်ကလူကြီးကို ဂေဇတ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးထားပြီးပြီဆိုတော့ သူဖတ်ရင် တွေ့အောင်လို့ရေးထားတာနေမှာ… .. ကွဲသွားတဲ့ လက်ပကျွတ်ပြန်ဝယ်ပေးမလားလို့ ဆင်ထားတာ နေမှာ …. :grin: :grin:
အသံထွက်အောင်ရယ်ရတယ် မမမိုချိုရေ …
ဘယ်သူကများအိမ်သာအကြောင်း အထောက်အထားနဲ့လာငြင်းမလဲ စောင့်ဖတ်နေပါ့မယ်
သူများတွေ အတွက် တက္ကသိုလ် ရဲ့ အစောပိုင်း ကာလတွေဟာ ပျော် ရွှင်မှု တတ်ကြွ မှု တွေနဲ့ အမှတ်ရစရာပါ။ ကျမ အတွက် ကတော့ အလွဲတွေ လုပ်ပြီး စိတ် တွေ ရှုပ်ခဲ့ ရတာ ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ၉၆ ကျောင်းသား အရေး ခင်းဖြစ်ပြီး ကျောင်းတွေပိတ် လိုက် လို့သိပ်တောင် မလွဲ လိုက် ရပါဘူး။
ကျောင်းတော်ကြီးမှာ ခဏတာပဲ ခြေချခွင့် ရခဲ့ ပေမယ့် ရည်း စားတယောက် အဖက်တင် အောင် ကို လွဲတဲ့ သူပါ.။ …..ရှုး….တိုး…တိုး….နောက်မှ ပြောတော့ မယ်။
တခြားဟာလွဲပေမယ့် ဒါကျမှ ဒဲ့ ..မှန်သွားသတော့ ….
ရွာထဲမှာ ရေးနေကြတဲ့ သူတွေ ရှိတာဘဲ
(ဟိုအမကြီးတွေ အိမ်သာ သုတေသန ဆက်လက်ပြုစုရန် လမ်းစပေးနေပါပြီ..)
မမိုးရေ ကျမတော့ ယောက်ျားလေးအိမ်သာထဲကို တခါမှ မှားမ၀င်ဖူးပေမဲ့ တခါကတော့ ရေကူးကန်မှာ အမျိုးသားခန်းဘက် မှားဝင်ဖူးပါတယ်။ ခါတိုင်းသွားနေကျ ဘက်မဟုတ်ပဲ မနက်ခပ်စောစောသွားမိတဲ့နေ့မှာ အမတွေကလည်း မပါ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း မရောက်သေးနဲ့ ရှေ့က အမကြီးနောက်ကို လိုက်တာပါ။ သူက သူ့အမျိုးသားပါတော့ အထုပ်ပေးပြီး တက်သွားတာ မသိလိုက်ဖူး။
ကျမကငိုက်စိုက် ငိုက်စိုက်နဲ့ အခန်းထဲထိလိုက်ဝင် သွားတာ။ သိသိချင်း ဘာပြောကောင်းမလဲ လှေကားပေါ်တက်ပြေးတာ ချော်လဲ မတတ်ပဲ။ အခန်းထဲ လူက အပြည့်။ အဲ့ဒီနေ့က ရေတောင် ကြာကြာမကူးရဲဘူး။ ပြုံးစိစိနဲ့ လှမ်းလှမ်းကြည့်ကြလို့။
မိန်းကလေး အိမ်သာထဲမ၀င်ဘူးတော့ ဘယ်ဟာ ပိုနံတယ်ပြောရန်ခက်ပါကြောင်း။ နောက်မှ ရုပ်တည်ကြီးနှင့် မှားဝင်ပြီး သုသေသနလုပ်ကြည်ဦးမယ် :-)
ယောက်ျားလေးများ က ဆေးလိပ်သောက်၊ အရက်သောက်တဲ့အတွက်ပိုအနံပြင်းလိမ့်မည်ဟု ထင်မိပါကြောင်း :-)
ရီးစားအဖတ်တင် တဲ့အကြောင်းလေးလဲ ကြားချင်တယ်ဗျို့
ပြေတည်ဥ က မနှစ်တစ်နှစ်ကမှ နံမည်ကြီးတာပါ သူနံမည်မကြီးခင်တစ်နှစ်က မောင်လုံးနားမှာ ညီမတွေ့ တယ် ဘာမှကိုမထူးခြားဘူး မဲမဲချုပ်ချုပ်ပါပဲ ……
မမိုချိုကကျောင်းတုန်းကအကြောင်းတွေပြောတော့ ညီမတောင် တက္ကသိုလ်ကြောင်သူဘ၀ကို ပြန်သတိရသွားတယ် ညီမက ကျောင်းတုန်းကတစ်အားကို ရှုပ်ခဲ့တာ …… ပျော်ပျော်နေခဲ့တာ ဆိုပိုမှန်ပါတယ် ……
ဒီကိစ္စ တကဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်တဲ့
ဒေါ်အီးတုံး နှင့် ကိုပုဒမ္မာတို့မှ အဆုံးအဖြတ်ပေးစေလိုပါဂျောင်း…
” “ကျောင်းတော်ကြီးမှာ ခဏတာပဲ ခြေချခွင့် ရခဲ့ ပေမယ့် ရည်း စားတယောက် အဖက်တင် အောင် ကို လွဲတဲ့ သူပါ.။” ” တညိုးဘဲနော်… အဲဒါ တော်ထှာလေ… ဟုတ်ဘူးရား….:P
Zune Phyu says:
ရွာထဲမှာတယောက်တင်ဖူးတယ်။ သူလဲအလွဲများဆိုပြီး။ နာမည်တော့မှတ်မိတော့ဘူး။ သူ့အလွဲထဲမှာလဲ အဲဒီအိမ်သာ အလွဲပါဖူးတယ်။ သူက မိန်းကလေးအိမ်သာမှားဝင်တာမို့ သူကတော့ ကောင်းကောင်းပြောပြ နိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ သူ့ကိုအရင်ရှာရမယ်။ တွေ့မှ မမိုချိုနဲ့ စကားရည် လုခိုင်းမယ်။ ကောင်းဘူးလား။
ယောကျာ်းကမိန်းမအိမ်သာထဲမှားဝင်ရင်.. အခန့်မသင့်ရင်.. ထောင်ကျနိုင်ပါတယ်..
အောက်ကလင့်ခ်မှာတော့.. ကျားနဲ့မ.. ကွာခြားချက်ကလေးရေးထားတယ်..
လိုက်ဖတ်ကြည့်သလောက်တော့.. ယောကျာ်းအိမ်သာက.. ပိုနံမဲ့ပုံ…
Can you tell the difference between female and male urine?
yes, I have heard it can be detected, butatest for determining sex of urine has to be given.
The “test” for determining the sex of urine is real easy: cap the bottle and shake it for about ten seconds. Male urine developsafoam on top. Female urine does not.
When I startedasuboxone clinicafew years ago part of the requirement was I doaurine drug test onceaweek. I didn’t want to stop smoking pot so I foundaguy who was also using suboxone (AND ONLY SUBOXONE) and he pissed inacup for me. He’d fillabottle which i could split over four weeks. Id addatablespoon of boiling hot water to the cup before I left the house and submerge the cup inathermos of hot water. I never failedatest (over2years.) It is important to note that the place I pissed at sent it out so I don’t know if the temp would be okay if the facility tests then and there. No one ever detectedamales urine when I submitted my sample. Also important to note, many drug tests strip you down and you can’t bring your purse in the room with you so know what facility you are using.
Read more: http://wiki.answers.com/Q/Can_you_tell_the_difference_between_female_and_male_urine#ixzz1yyvBE1sx
မသိလို့ မှားဝင်တာ သုံးခါ
သိပြီးတော့ မှားဝင်ခဲ့တာ ရှယ်ခါ
“ဒါကြောင့် မိန်းမအိမ်သာနဲ့ ယောက်ျားအိမ်သာ မတူတဲ့အချက်ကို အများ သိပ်မသိ ကြပါဘူး။ ကွာ ခြား ချက် က ယောက်ျားအိမ်သာက အနံ့ပိုပြင်းတယ် ၊ရှင်းရှင်းပြောရရင် ရှူရှူး နံ့ ပို နံပါတယ်။ ဘေစင်လို့ ထင်မိတဲ့ ဟာ တွေကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အိမ်သာထဲစ၀င်ဝင်ချင်း နံလိုက်တာ လို့တောင် လွှတ်ခနဲ ပြောလိုက်မိသေးတယ် ….။
မိုချို ပြောတာ သဘောမတူတဲ့ ယောက်ျားလေးများ အထောက်အထားနဲ့ (မိန်းကလေးအိမ်သာ ထဲ ဘယ်တုန်းက ၊ဘယ်လို ရောက်ခဲ့တယ် ၊ ပို နံတယ် ပို မနံဘူး စသည်ဖြင့် ) အငြင်းပွားနိုင်ပါတယ်။”
နည်းနည်းတော့ ပြောအုံးမှ ဖြစ်မှာပါ။ သြရတို့လဲ အင်ဂျင်နီယာပါ၊( ကြုံတုန်းလေး ကြွားအုံးမှ) ယောက်ျားအိမ်သာက အနံ့ပိုပြင်းတယ် ဆိုတာ မဟုတ်ပါ၊ သန့်ရှင်းရေး မကောင်းလို့ နေမှာပါ။ သန့်ရှင်းရေး အတူတူလုပ်ထားတဲ့ အိမ်သာတွေ ဝင်ကြည့် ရင်သိမှာပါ၊ ကိုယ်တွေက သန့်ရှင်းရေး အတွက် ဝင်ဝင်ပြီး စစ်ဖူးပါတယ်၊ တရားဝင် တမင် ဝင်တာပါ၊ စဝင် ဝင်ခြင်း အနံ့ တစ်ခုသတိထားမိပါ တယ်၊ အစတော့ဘာမှန်းမသိပါ ဘူး။ ငပိလိုလို ငံပြာရည် လိုလို။ ညှီပုပ်ပုပ်ပါ။ နောက်မှ အမှိုက်တောင်း ထဲကြည့်လိုက်တော့ လစဉ်သုံးတွေ ဖြစ်နေတာ။ တချို့ အိမ်သာမှာတော့ ဘာမှမရှိဘူး ရှင်းလို့ပဲ အနံ့ကတော့ ရလျက်ပဲ အနံ့တွေက စွဲနေပြီ။ မိန်းကလေး တွေကတော့ ရမှာမဟုတ်ဘူး သူတို့က အနံ့ယဉ်နေပြီလေ၊ ဒါကြောင့်မိန်းကလေး အိမ်သာက အနံ့ ပိုစုံ (တညင်းသီး ပေါ်ချိန်ဆို ပိုဆိုးတာပေါ့ သူတို့က ပိုကြိုက် ပိုစားတဲ့သူများတယ်လေ) ပိုနံ ကြောင်းပါ ခင်ဗျား ။ ငြင်းရင်တော့ သူကြီးကို ဒိုင်လုပ်ခိုင်း ပြီး အများသုံးအိမ်သာ များဝင်စစ် ဆုံးဖြတ်သင့်ပါကြောင်း။။
သဂျီးကတော့ယောက်ျားလေးအိမ်သာ ပိုနံတာ မငြင်း ဘူးတဲ့.. အကိုးအကားနဲ့ ပြောနေပြီ။
နဲ့ နင်လား ငါလားပါပဲလားနော်……
တို့တွေ ရဲ့ အမိကျောင်းတော် စီးပွါးရေး (main) က တော့ E shape ။
အလယ်က ဆင်ဝင် အကြီးကြီး။
ဘွဲ့နှင်းသဘင် ဘက် တောင်ပံ အစွန်းမှာ မိန်းကလေး အိမ်သာ နဲ့ နားနေခန်း။
ပြည်လမ်း ဘက် တောင်ပံ အစွန်းမှာ ကျား အိမ်သာ နဲ့ နားနေခန်း။
မိုချို့ စာ ကို လဲ နေ့လည်က ဖတ်ထားတာ၊ အခု မှ ပြန်သတိရလို့ စက်ကို တစ်ခေါက် ပြန်ဖွင့်ပြီး မန့် ရတာ … မိုချို က အထူး စာရိုက် သူမို့ ;-)
မိုချိုရဲ့ အရေ မရ အဖက် မရ စာတွေ အတွက်သက်သက် ပြန်လာမန့် ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင် သလို အားလည်း နာလှပါတယ်။ သူများတွေလို အကျိုးပြု ပိုစ့် တွေ ရေးချင် ပေမယ့် ၊စိတ်ကူးလည်း ရှိပေမယ့် အလွယ် တကူ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး တွေ ပဲရေး ဖြစ်နေတယ်။
စာရိုက်တာ တော့ ကီးဘုတ်မကြည့် ပဲ မရိုက် တတ်ဘူး၊ ကီးဘုက် ကြည့် လိုက်၊ မော်နီ တာကြည့် လိုက်နဲ့ နဲနဲတော့ ပင်ပန်းတယ်၊ ကီး ဘုက်မကြည့် ပဲရိုက် တတ်အောင် ဘယ်လိုကျင့် ရမှန်းကို မသိဘူး။